Azo alaina izao ny Photoshop ho an'ny iPad Inona no atolotray antsika amin'ity kinova ity? | Vaovao momba ny gadget
Ignacio Sala | | fampiharana, takela-bato
Miala amin'ny iPadOS 13, Apple dia nanome ny iPad ny fanerena ilaina mba hahatonga ity fitaovana ity ho fitaovana tonga lafatra hanoloana ny solosaina finday taloha amin'ny fitaovana maivana kokoa sy kely kokoa ary mahazo aina kokoa hitondra fitaovana. Rehefa mandeha ny volana, tsikelikely ny ho avy ny fangatahana hahazoana tombony betsaka indrindra.
Misy tonian-dahatsoratra maro ho an'ny iPad ao amin'ny App Store, na izany aza, tsy izy rehetra ireo no manome antsika endrika mitovy hitantsika amin'ny rindranasa amin'ny solosaina. Miaraka amin'ny fahatongavan'i Photoshop amin'ny iPad dia lasa mora kokoa ny fomba fanovana sary amin'ny Apple iPad. Nefa Inona no atolotry ny Photoshop antsika ho an'ny iPad?
Photoshop no rindrambaiko sary sy famolavolana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao, toy ny Spotify mozika na Netflix an'ny horonantsary mivantana. Fantatry ny rehetra ny fiasa amin'ny Photoshop, ka holazainay aminao kely na tsy misy momba an'ity rindranasa ity izay tsy fantatrao tsara. Miaraka amin'ny famoahana ny kinova iPad dia azontsika atao amboary izay sary na mamorona zavatra tonga ao an-tsaina.
1 Photoshop ho an'ny iPad, izay nandrasantsika rehetra
1.1 Mamorona rakitra amin'ny endrika PSD
1.2 Mamolavola endrika mitovy amin'ny kinova desktop
1.3 Miasa na aiza na aiza
1.4 Alefaso amin'ny endrika hafa
1.5 Amboary haingana ny sary
1.6 Miara-miasa amin'ny Apple Pencil
2 Fitaovana mifanaraka amin'ny Photoshop ho an'ny iPad
3 Fepetran'ny Photoshop ho an'ny iPad
4 Tsy misy afa-tsy amin'ny teny anglisy (amin'izao fotoana izao)
5 Ohatrinona ny vidin'ny Photoshop ho an'ny iPad?
Photoshop ho an'ny iPad, izay nandrasantsika rehetra
Araka ny filazan'ny orinasa, ity kinova voalohany ity mifantoka amin'ny fitaovana fandrafetana sy famerenana natao hiasa amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny Apple Pencil, fitaovana iray izay tsy ilaina fa manampy be dia be rehefa miasa miaraka amin'ilay rindranasa.
Mamorona rakitra amin'ny endrika PSD
Ny endrika PSD dia ilay ampiasain'ny Photoshop, endrika izay manolotra antsika fahaiza-manao mahatalanjona Amin'ny alàlan'ny fitahirizana ireo atiny rehetra amin'ny alàlan'ny sosona, sosona izay azontsika ovaina, mamafa, manambatra, mamerina mandamina tsy miankina. Ny sanganasa noforoninay tamin'ny iPad dia azo zaraina amin'ny fitaovana hafa mampiasa Photoshop na tonian-dahatsoratra manohana an'io endrika io.
Mamolavola endrika mitovy amin'ny kinova desktop
Mba hahamora kokoa ny fampiasana an'ity kinova vaovao ity ho an'ny takelaka, ary tsy misy fiolahana fianarana, asehon'i Photoshop ho an'ny iPad amintsika ilay endrika mitovy hitantsika ao amin'ny kinova desktop. Eo amin'ny ilany ankavia dia hitantsika ireo fitaovana rehetra misy ary eo ankavanan'ny efijery ny fitantanana ireo sosona samihafa noforoninay.
Miasa na aiza na aiza
Ny rakitra rehetra izay noforoninay tao amin'ny fitaovantsika dia voatahiry ao anaty rahona Adobe izay mamela antsika ampidiro amin'izy ireo amin'ny solosaina hafa mampiasa kaonty Adobe mitovy, noho izany dia hialantsika ny fandefasana ireo rakitra mavesatra noforoninay tamin'ny alàlan'ny mailaka, sehatra fandefasan-kafatra ...
Ankoatra izany, izay fanovana ataontsika amin'ny sary fa manitsy izahay dia voatahiry ao amin'ny rahona Adobe, izay ahafahantsika manohy manitsy haingana ireo sary ao amin'ny solosaintsika raha misy antony, tsy avelan'ny iPad ho an'ny fotoana fohy.
Alefaso amin'ny endrika hafa
Ny endrika PSD dia mamela antsika hitahiry ireo sosona / zavatra rehetra nampidirinay tao amin'ilay sary noforoninay tsy miankina fa tao anaty fisie tokana, ahafahantsika mamafa na manitsy ireo sosona isaky ny mila izany. Rehefa maneho ny asantsika dia tsy aterina amin'ny endrika PSD mihitsy ilay antontan-taratasy mba azo ovaina, fa ny sosona rehetra kosa dia voasokajy ho iray, toy ny endrika PNG, JPEG ary TIFF, endrika ahafahantsika manondrana ireo rakitra noforoninay tamin'ity rindranasa ity.
Amboary haingana ny sary
Esory ny jiro tsy ilaina, apetaho ny sivana, ampiasao ny fitaovana clone hialana amin'ireo zavatra tsy ilaina ... azo atao izany rehetra izany satria azontsika atao ao amin'ny kinova desktop, na amin'ny alàlan'ny Apple Pencil na amin'ny fampiasana ny rantsan-tananay eo amin'ny efijery.
Miara-miasa amin'ny Apple Pencil
Tahaka ny vy ny pulsaintsika, ny fiaraha-miasa amin'ny Apple Pencil amin'ny Photoshop ho an'ny iPad dia manome antsika mazava tsara fa tianay indrindra ny mampiasa ny totozy, indrindra rehefa mampiasa ireo borosy samihafa natolotry ny fampiharana anay.
Ho fanampin'izay, safidio amin'ny tanana, amin'ny alàlan'ny fitaovana Lasso hamoronana sosona vaovao, hampihatra ny vokany, hanarontsaronana ny fidirana, hanatontosa asa hafa tsio-drivotra miaraka amin'ny Apple Pencil.
Fitaovana mifanaraka amin'ny Photoshop ho an'ny iPad
Mba hahafahana mampiasa Photoshop ho an'ny iPad, ny fepetra ilaina voalohany dia ny fitaovantsika tantanan'ny iPadOS, ka ireo maodely rehetra ireo izay tsy novaina tamin'ny iOS 13 dia tsy afaka mametraka ilay rindranasa.
iPad Pro (12.9-inch) ny maodely rehetra
iPad faha-5 andiany mandroso.
iPad Mini 4 mandroso.
iPad Air 2 mandroso.
Apple Pencil amin'ny taranaka voalohany sy faharoa. Tsy voalaza raha ny Logitech CrayonNy Apple Pencil mora vidy dia mifanaraka, fa azo inoana fa.
Fepetran'ny Photoshop ho an'ny iPad
Raha efa antitra ny iPad-nay, ny sasany amin'ireo lahasa omen'ny fampiharana antsika, toy ny vokany, dia tsy misy. Ny fampiasa hafa toy ny sivana marani-tsaina dia mbola tsy misy, izay hanery antsika hampiasa ny kinova solosaina. Ity famerana ity dia zava-dehibe fa ho an'ny kinova Photoshop ho an'ny iPad, satria ho an'ny mpampiasa sasany dia mety ho fitaovana ampiasaina indrindra izy io ary manome ny fahaiza-manao lehibe indrindra.
Tsy misy afa-tsy amin'ny teny anglisy (amin'izao fotoana izao)
Raha mampiasa ny kinovan'ny Photoshop ho an'ny solosainao (PC na Mac) ianao dia mety hampiasa ilay kinova azonao amin'ny Espaniôla. Ny kinova ho an'ny iPad, amin'izao fotoana izao, Amin'ny teny anglisy ihany no misy azy. Izay amin'ny teôria dia mety ho fetra, amin'ny farany dia tsy izany, satria ny fiasa izay atolotra antsika dia aseho amin'ny alàlan'ny sary masina, ireo zavatra hitantsika tao amin'ny kinova solosaina, koa raha tsy nampiasa an'ity fampiharana ity ianao dia tsy manana olana ny fahazoana azy io haingana.
Ohatrinona ny vidin'ny Photoshop ho an'ny iPad?
Fampidinana Photoshop ho an'ny iPad dia tena malalaka (tsy mifanaraka amin'ny iPhone). Raha te-hahazo tombony betsaka amin'izany sy hiara-miasa aminy dia ilaina ny mampiasa ny famandrihana isam-bolana izay misy vidiny 10,99 euro isam-bolana. Raha tsy azonao antoka raha manome anao izay tadiavinao ity kinova ho an'ny iPad ity dia mamela antsika hanandrana maimaim-poana ny fampiharana mandritra ny 30 andro i Adobe.
Raha mizaha ny fangatahana isika mandritra ny 30 andro voalohany, dia tsy maintsy tadidintsika fa tsy maintsy atao izany misoratra anarana isam-bolana (dingana izay azontsika atao amin'ny iPhone sy amin'ny iPad) raha tsy mikasa ny hanohy hampiasa ny fampiharana amin'ny ho avy izahay, satria raha tsy izany dia homena 10,99 euro isam-bolana izahay amin'ny famandrihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Azo alaina izao ny Photoshop ho an'ny iPad Inona no atolotray antsika amin'ity kinova ity?
Headphone Arbily G8, TWS Hi-Fi miaraka amina endrika tena sahisahy